Bathi akayekwe phansi uZuma | News24
John Hlongwa noBheki Ndlovana, ILANGA LangeSonto
Durban - Abahamba phambili emkhankasweni wokweseka lowo obengumengameli kuleli uJcob Zuma, emacaleni enkohlakalo abhekene nawo eNkantolo eNkulu eThekwini, bathi noma engapendwa ngodaka kodwa ngeke bagudluke ekumesekeni.
Lokhu kulandela ukuba inqwaba yabantu ezinkundleni zokuxhumana ezahlukene ikhwele yadilika kuZuma, imgxeka mayelana nodaba olusabalale ngoLwesihlanu lokuthi uzothatha enye inkosikazi.
Okugqamile okususe umsindo nokuyikho abantu abaningi abaphawule ngakho wukuthio lo wesifazane okuthiwa uzogcagcela kwaZuma, uNonkanyiso Chonco waseMatatiele, mncane kakhulu ngokweminyaka njengoba kuthiwa uneminyaka engu-24 ubudala kanti uZuma uneminyaka engu-76.
OLUNYE UDABA:Owesifazane waseBallito uqinisekisa eyokushada noJacob Zuma
Kuvele emithonjeni eyahlukene yezindaba nokuthi uChonco uzalele uZuma ingane ngeSonto eledlule kwesinye sezibhedlela esiseHillcrest, entshonalanga yeTheku.
UMfundisi Vusi Duve waseThekwini Community Church (ECC), ungomunye walaba abahamba phambili kulaba abeseka uZuma ugxeke abezindaba, wathi sebemgibela ekhanda uZuma, sebegaxele kakhulu ezindabeni zakhe, abamhloniphi.
Uthi akukho nto ezopgazamisa ekwesekeni uZum, umkhankaso wabo uyaqhubeka. Utshele intatheli ukuthi abafuni nakuyingena nje ethinta izindaba zakhe zasekhaya.
Omunye futhi ophambili kulo mkhankaso, uBishop Bheki Ngcobo weNkanyezi Vhurch of Christ, ophinde abe nguSihlalo weNational Interfaith Council of South Africa (NICSA), uthe abajiki ekwesekeni uZuma.
Uthi sebezwile ngale ndaba noma ingakafiki kubo ngokusemthethweni. Nye uyakuhlaba ukuthi kuthiwe uChonco muncane kunoZuma ngokweminyaka ngoba eNingizimu Afrika awukho umthetho othi ungaganwa ngumuntu ongakanani, inqobo nje uma esephumile esigabeni sokuba yingane (okuyiminyaka engaphansi kwengu-18 yobudala).
Thola udaba oluphelele kwiphephandaba ILANGA LangeSonto.